Uzojeziswa umfundi ongqimuze uthisha | Isolezwe
Uzojeziswa umfundi ongqimuze uthisha
Isolezwe / 29 August 2012, 12:26pm /
UZOTHATHELWA izinyathelo yisikole afunda kusona umfundi wase-Usizo High eMsinga ogingqe ngequpha uthisha wakhe ngoba bengazwananga.
Lo mfundi kuthiwa ushaye lo thisha wangeniswa esibhedlela ngemuva kokungaboni ngaso linye ngeledlule.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo, uMnuz Sihle Mlotshwa, uthe lesi sehlakalo esibashaqisile senzeke ngoLwesibili olwedlule lapho umfundi emane wavulela ngenduku kulo thisha wesilisa.
Uthe bayaluphenya lolu daba kanti abazali nothishanhloko bamvakashele lo thisha esibhedlela, wathi isikole sizomthathela izinyathelo lo mfundi.
“Asikwazi ukuthi singaba nezimo ezinje ezikoleni. Isikole sizomthathela izinyathelo silandela imithetho nemigomo ebekiwe. Izikole yindawo yokufunda nokufundisa abafuna ukugcwaneka abahambe bayokwenza kwenye indawo,” kusho uMlotshwa.
Yize induku seyavalwa ezikoleni zakuleli kodwa othisha nothishanhloko basaqhubeka nokushaya abafundi, abanye sebakhonjwa nendlela, abanye bazobhekana nokuqondiswa kwezigwegwe ngoba akuvumelekile ukushaywa kwabafundi.
Kothisha abangu-70 abaphenywa wuMnyango ngokungaziphathi kahle, abahlanu baphenywa ngamacala okushaya abafundi, abathathu abasebenzisa induku, abayisithupha okulala nabafundi, abayisishiyagalolunye abaneziqu ezingombombayi, abane ngokulwa esikoleni.
Kwelokushaywa kwabafundi uMlotshwa uthe, kusuka nyakenye kuze kube yimanje sebephenye amacala ayisishiyagalombili othisha abashaya abafundi.
“Abahlanu sabakhomba indlela, oyedwa wanikwa isexwayiso sokugcina, ababili bazobhekana nokuqondiswa izigwegwe. Amacala okushaywa kwabafundi awabikwa kakhulu eMnyangweni ngaphandle uma umfundi elimale kakhulu,” usho kanje.
Uthe lezi zibalo kungenzeka ukuthi azisho into okuyiyona eyenzekayo ezikoleni zesifundazwe ngoba azibikwa lezi zehlakalo.
Uthe: “Sithanda ukuxwayisa othisha nothishanhloko abasaqhubeka nokushaya abafundi ukuthi abakuyeke lokhu ngoba uyaxoshwa ngisho ukuxoshwa emsebenzini.”
Phambilini uMnyango wachithwa yinkantolo waphoqwa ukuba ukhokhe izindleko zecala lomfundi owalimala ehlweni ngesikhathi eshaywa nguthisha. UMlotshwa uthe bayasihlonipha isinqumo senkantolo futhi abazimisele ukusiphikisa, wathi uma kuwukuthi uMnyango uyiswa enkantolo ngenxa yokushaywa kwabafundi, lowo thisha kumele azi ukuthi uzoyikhokha imali yoMnyango yasezinkantolo.